Waa maxay sababta markasta naloogu qasbaa dowlada ku-meelgaar ah?
Danaha laga leeyahay waa mid dhinacayo badan taabaneysa oo umada oo dhan u wada dhan yihiin inaan geyigaas dowlada aanan ka abuurmin, iyadoo marba la soo dhoodhoobo wax dowlad u eg, balse ahmiyada laga leeyahay aysan ahayn iney waarta oo arimo khaas lagu fushisto.
Waxaa jira kooxo, shaqsiyaad iyo dowlada farabadan oo aan rabin iney Somaliya dowlad waarta ka dhalato waxay isugu jiraan kuwani Somaali, Gaalo, Muslim iyo Madow. Maqaalkeyga waxaan ku qaadaa dhigayaa danooyinka is diidan ee laga leeyahay Somaliya iyo waxa markasta soo celiya waxa la yiraahdo “Dowlada Ku Meel Gaar”.
Maxaa looga dan leeyahay inaan DKMG aanan marnaba dhaafin
Danaha is diidan ee Somaliya ay ka leehiyiin wadamada deriska ee Itoobiya iyo Kenya, Carabta khaasatan Masar, Suudaan, Qadar iyo Sacuudi Arabiya iyo Mareykanka ayaa ugu horeeya in aan meesha ka hirgelin wax dowlad waarta ah walow midba uu siyaasad juqraafiyeed (geo-political) uu wato si uu gacan ugu yeesho waxa ka socda Geeska Africa oo ay Somalidu ku jirto.
Cidina daah kama saarna in Kenya iyo Itoobiya ay doonayaan dowlada KMG ayaga ka shidaal qaadata Somaliya laga hirgeliyo marka la doonana ay mid kale oo ay ku meel gaaraan sameynaya, iyadoo Mareykanka kor ka ilaaliyo si culeyska Musliminta gobolka Geeska Africa loo dhimo oo aysan isugu xirmin min Muqdishu ilaa Tunis dacalka Medetreninan Sea oo wada dowlada Muslin ah, welina ku fadhiya dhul ahmiyad weyn ku fadhiya.
Waxaa kooxdana la halmaala Yurubta ama EU oo rabta iney caalamka siyaasadeed ku weeciso balse iyadoo garabsanaysa dalka Mareykanka.
Siyaasadaha Mareykanka iyo EU waxaa looga gon leeyahay difaacida diintooda oo ah mida ugu horeysa maadaama dagaalka maanta dunida Muslimka ka socda uu yahay mid ay wadamada reer galbeedka ku yareynayaan in dowlada Islaami ah Shariicada Islaamka ah soo baxaan. Iyadoo taas laga duulayo ayaa dagaalka waxaa lagii hurinayaa sedex meelood oo dadyowga Muslimka ah ku badan yihiin ayna ahmiyada xag nololeed, juqoraafi iyo diin ugu fadhida Musliminta sida Afghanistan-Pakistan, Falastiin-Lubnaan-Ciraaq iyo Somalia-Sudan.
Iyadoo stratijiyadas ka dulayaan ayaa wadanka Somaliya ku qaabeeyaan dhibaatada iney tahay mid qabiiled ama dhuleed ama mid shaqsi lagu faquuqayo. Somalida qabiilkasta meesha uu dego wuu yaqanaa hadii uu Illaah ay ka cabsanayaan hadii laga soo tago anaa xoresytey! Cidkasta dhulka ka maqan iyo kan xooga uga heysta wuu yaqaanaa, Hargeysa ka imaw, ama Mudug ama Baydhabo, qoys aanan gurigiisa garaneynin ma jiraan. Mida shaqsiyadeed waa mid iska cad, oo caadifada qabiilka meesha imaan karto waaba hadii mansabka shaqsigaas uu awood qabiileed ku yimaado. Waayo maanta Somaliya ma jirto qabiil cusub oo dhashay ama cirka ka soo dhacay, ee taasi waa shey ducfi ah ama dulmiga lagu sii seyta dheereysanayo cida maanta ku doodeysa dhulbaa la inaga heystaa ama qabiil baa duulaan nagu ah, waa shey cadowga ay rabaan iney Somaalidaan dhibaateysan ayasan weligeed uga bixin.
Dhibaatada Somalida waxa la wadaago tan Suudaan lagu haayo oo dhinac kasta laga soo marayo, mar kuwo diinta gaalada heysta laga soo kiciyey koonfurta lagu dagaal geliyo iyadoo la sii adeegsanayo Kenya, Itoobiya iyo Uganda. Waxay wadamada reer galbeedka u suuro gashey iney dhinacas kaga guuleystaan Suudaan oo ahayd shacab dadkooda diinta aad u jecelyihiin, Afrikaanimada, Carbnimada iyo Islaamnimada la weyn yihiin.
Itoobiya, Uganda, Burundi iyo Rwanda waxaa laga dhaadhiciyey in hadii dowlad islaam ah Somaliya ka dhalato ay culeys saari doonto Itoobiya oo dadkeedu boqolkiiba konton 50% Muslim yihiin, taasna u saamixi karto iney siyaasada geeska Afrika wax iska bedelaan ayna xiriir toosan la yeelana karaan Suudaan taasoo dhuminaysa sheegashada dowlada Koonfurta Suudaan. Tan ayaa khasab ku noqotey in Uganda iyo Burundi ay ciidan u soo diraan Somaliya si ay garab u siiyaan DKMG.
Sidaan kor ku soo sheegey dowladaha deriska nala ah ma rabaan in dowlad waarta oo dalka hanan karta ay ka dhalato Somaliya, waayo waxaa tusaale inooga filan midi C/lahi Yusuf oo awood lagu taageerey, ciidan badana sameysatay, gobolo fara badan gacanta ku hayeen intii aan kooxaha mujaahidiinta ee Itoobiya dalka ka saarey aanan soo laba kacaleeynin.
Dowladahan waxay ogaadeen in C/lahi Yusuf u ku jirey sidii ciidan baxad weyn leh u sameysan lahaa oo dalka hanata waa wuxuu gacanta mar ku hayay laga soo bilaabo Beledxaawo ilaa Boosaaso, balse Itoobiya waxay aragteen inuusan jawiga sidaas ku wanaagsaneyn, C/lahi Yusuf waxaa laga diidey in AMISOM Baydhabo ku ilaaliyaan dowlada ilaa Muqdisho siweyn u aslaaxdo, balse jalaafooyin badan baa loo dhigey. Waxaan loo sheegey inuu Muqdisho u guuro uuna ka amar qaato Col Gabre oo ahaa ninka Itoobiya ugu qaabilasanaa Somaliya.
Inta badan xubnihii ku jirey dowlada C/lahi Yusuf ayaa si cad kuugu sheegaya inaan la rabin in dalka wax loo qabto, cidii isku deyda xilfaha loo laabi jirey ama wareegto Addis Ababa ka timaado lagu casili jirey. Siyaasada Itoobiya ayaa ka xoog badan tan Kenya, Itoobiya waxa rabtaa in hadba misaanka shacabka meesha uu u bato ka soo leexiso iyadoo keeneyna qof ay isku aragti yihiin oo lacag fara badan ku bixisa. Taasi waxaa tusaale inooga filan wadadii C/lahi Yusuf, Geedi iyo Nuur Cade mareen. Itoobiya waxaa ka go’an in hadii shaqsi iyada taageersan uusan mansabka Somaliya wax kalahayn ay si kale u qarbudo, balse waxay heystaa kuwo badan oo dhega nugul oo isugu jira hogaamiye kooxee, sheikh, odey dhaqmeed iyo ganacsato. Siyaadeeda ku aadan waa “Kana Siib Kana Saar” si ay gumaadka ay ku heyso dadka Somalida iyo bahdalida siyaasaded ee Muslimiinta Itoobiya marna uga bixin.
Shaqsiyaadka ku dhiirta iney dowlad ay Itoobiya garwadeen ka tahay ama mid aan umada u wada dhamayn ay ugu biiraan waa gurashada lacagta Somalida ah loogu deeqo ee aan xisaabtanka lahayn. Waayo damiirkooda iyo garaadkooda dadnimeed iyo mid diineedba aad uga dhintey, xaqa iyo baadilkana u siman tahay. Waxaad mararka qaarkood shirarka ku arkeysaa kuwo markii safiir Itoobiyaan aha ama wasiir Kenyan salaamo ay qiirad dartiisa la ilmeeya farxad dartood, waxayna niyada markiiba gashanayaan iney iyagu yihiin shaqsiyaga ugu dhaw arimaha Somaliya. Waxaan in badanba aan aragney iyadoo la leeyahay heblow wuxuu taageero ka heystaa Itoobiya iyo Kenya, heblow ayaa safaarada Mareykanka lagu casuumey iyo waxyaabo yaqyasi leh, balse maa aanan arag labaatankii sano ee la soo dhaafey shaqsi taagero ka raadiyey shacabka , marka laga reebo C/Qasim oo Baydhabo inuu xarun ka dhigto diidey, dadkeedana taageero ugu raadiyey si fiicana u soo dhaweeyen balse wuxuu doorbidey in DKMG waqtiigeeda ku dhameysto Xamar oo markaas ay isbaaro u tiiley laba iyo toban Itoobiya kal-kaal ah sida Maxamed Dhre, Muse Suudi, Cumar Finish, Qanyare, Caato, Qeybdiid iyo kuwo kale oo fara badan dhex fadhiya. Balse isna wuu eedey markii dambe waayo waxaa uu door bidey inuu kistiisa iska dhuuqo.
Hada iyo xaalka sida uu yahay
Runtii shaqsiyaadkii Itoobiya ku kalsooneyd weli meesha ayay fadhiyaan meelna uma dhaqaaqin, midna kama dhiman, welina suxul duub ayay waxay ugu jiraan iney magaca iyo mansabka Itoobiya lagu sii dhexwado dowlada garwadeenka ka yahay Sh Sharii, marka imaatinka Sh Shariif waxba kama bedelin and ka badeli mayo ahmiyada iyo qorshaha ay wadamada deriska ah ka leehiyiin Somaliya, wuuna dareensan yahay sidaas buu isna DKMG oo aan xalaal ahayn dusha u soo saartey sidii kuwii ka horeeyey. Micnaha ma ahan in wixii Djibouti lagu askumo ay xalaal yihiin, midka Kenya ama Itoobiya laga keeno ay xaaraan yihiin. Jabuuti malahan siyaasad dhaafsisan dhulkeeda, xiriir ganacsi ayay la leedahay Itoobiya waxayna il gaar ah isaga eegeysaa Eriteeriya oo dhul muran ah ka dhaxeeyaan, hadii ay Itoobiya iska xumeyso waxay ka baqeysaa in Itoobiya ay si toos ah u aqoonsato Somaliland hadhown xiriirka ganacsiga oo u badan dhanka Itoobiya meesha ku dhamaanayo, taasna soo dedejin karto in Eriteeriya ay si sahal ku qabsato Jabuuti.
DKMG maanta jirta waxaa horboode ka ah Sh Shariif oo maalmaha la soo shirtagey eedeynta Eriteerya, halka dhinacna ka difaacayo Itoobiya oo weli ciidan ka jooga Somaliya khaastan Hiiraan. Sh Shariif hadii uusan Eriteriya tegi lahayn waxaaba suurto gal noqon lahayd inuusanba heerka uu maanta joogo uusan joogi lahayn, waayo waxay siisey magan galyo runtii ahayd abaal weyn, balse sidii uu mujaahidiinta dhiigooda da’aya ugaga abaal dhacay buu uga abaal dhacay.
Itoobiya waxaa ay dhul ka heystaa Eriteeriya, weyna diidey iney dhulkaas wareejiso, labada dalka ciidan faro badan oo isu dhigma ayay leeyihiin, marka hadalada Shariifka waa “oohinta ergiga ka weyn”. Eriteeriya wax ay Soomali kala maqan tahay ayaa iska yar waayo xuduud ma leh, balse waxay diidan tahay dhibaatada ka jirta geeska Afrika oo ay Itoobiya horumood ka tahay. Itoobiya waxay taakuleysaa kooxo Islaamiyiin sheegta ah oo ka soo horjeeda Isayas Afawerke dowladiisa, marka meesha ay ugu diidan tahay in Somaliya dowlad Islaam ah oo dadka iyo goboladooda u wada dhan yihiin, halka ay kooxo Islaamiyiin ay ula rabto iney maamulka ka tuuraan maamulka Asmara. Taasi waxaa kaga cad in siyaasi isku sheegyada Somalida aysan fahamsanayn siyaasada dalkooda lala damacsan yahay iskaba daayee tan geeska Afrika.
Magaalada Muqdishu waxaa ka socda dagaalo oo runti ah kuwo xaqa iyo baadilka mid isaga mid yihiin midna laba shey oo cad ah oon isku darsoomi karin. Kuwa magaca DKMG meesha ku jooga waxaa isaga yaacsan runta iyo beenta ama si cad ayay xaqiiqda isaga indha tirayaan si ay waqtiga KMG ugu dhamaado iyagoo boorsooyinkooda u buuxaan sida kuwii ka horeeyey. Waxaa dadka quraan ku aqriya culimo aan Illaah ka baqeynin oo dadka xaqa ka qariya maanta dhigeyna in Somalida diiinteeda shaki laga geliyo. Culimada oo dhan isku mid ma ahan, waxaa jira kuwo aan xaqa sheegidiis aan ka gaban, mid aanan soo hadal qaadeyninba sidii kuwii Siyaad Bare ku daba felysanaa iyo kuwo ku dhaqma “la joojiyaana banana la jifiyaana banana”. Ma jirto meel ay shareecada Islaamka ka qabto in laba sheyn aan is anfacayn la isku wado, misaal ahaan in qofka uusan qamaar ciyaari karin, dhinaca kalena umada hogaankeeda hayo been ku hogaamiyo.
Maalmahan dambe waxaad arkeysa kuwo aayaad kuu daliishanaya oo ku leh, “waa in Illaahey, Rasuulkiisa iyo Ulul Amrigaba la adeeco”, labada hore la iskuma haayo, mida labaadna arinta Somaliya hadii aan si khaas ah uga hadalno Ulul Amri ay umada doorteen ma jiro, mid ayaga u soo halgamey oo wax la doonteen ma jiro, balse waa mid la soo dhoodhoobey oo KMG ah si fidnada wadanka ka jirta loogu dheereeyo umada. Si dhibaatada u sii socotana maanta waxay bilaabeen in qabiil adeegsadaan oo magacii DKMG qabiil la huwiyo oo la yiraahdo Baydhabo iyo Kismaaya la inaga soo duuley. Dagalada Markey laba cisho socdeen ayaa ergeyga UN-ka ugu qaabilsan Ahmed O Abdallah waxaa uu yiri “dagaaladan Muqdishu qabiil masuuliyadiisa ma sheegan”, tani waxay marag ma doonta u ah in maanta mabaadi’iida la isku hayo laga dhigo mid qabiileed oo aanan marba mabda’gan qaran ku saleynin.
C/lahi Yusuf waxa intii meesha isagana KMG u fadhiyey wuxuu ka cabaadayey qabiil kuna tilmaamey dowlad diid, balse waqtigiisa looguma dheereyn and mid kale oo qatarsan ayay keensadeen ileyna weli waxaa socda “kana siib kana saar”, in mucaaradkii ee C/lahi Yusuf ka soo horjeedey maantana loogu yeero qabiil ayaa la go’aansadey, odoyaashii shaleyto lahaa C/lahi Yusuf caadifad qabiil buu inagu baabi’yey oo wuxuu u aareyay reerihiisa, maanta isla odoyaashan ayaa leh mucaaradku qabiilbey inago soo duuliyeen, marka sidaan kor ku soo sheegey odayaasha waxaa ku jira kuwa shaaha u cadeeya Itoobiyanka, halka Maxamed Dheeren biyaha uugu dhaamiyaan sida horey looga soo xigtey mar Itoobiyanka Xamar xoog ku soo galeen. Marka labada KMG maxay is dhaamaan? Waa su’aal Somalida caqliga lahi, siyaasiga shucuurta wadaninimo ku jirta, shabaabka raba iney wadankooda mustaqbal wanaagsan u sameeya, hooyooyinka raba iney caruurtooda darxumo la’aan korsadaan iyo culimada xaqa iney sheegan ka ganbaneynin ayay u taalaa jawaabta.
Sh Xasan Dahir Aways hadalada uu ku hadlo ee ku aadan iney Soomali isu timaado oo aayaheed ka tashato iyadoon aan la fiirineynin qabiil iyo shaqsi iney tashadaan oo dowlad waarta dhistaan waa hadalo runtii qofka garaadka leh ee fahamsan meesha wax ka qaldan yihin fahmaya ay ku hadla. Yeysan dani ugu jirin iney Somali aan dowlad helin, ma Somalidaa mise cadowga is biirsadey? DKMG yey dani ugu jirtaa ma Somalida mise cadowga is biirsadey?
Caqliga wax qaadan karo ma ahan in shaleyto Jabuuti intii ay mujaahidiinta uga kala dhuunteen qol mugdi ah la galey casharkii Itoobiya meesha laga aqriyo, marna ay oran jireen meel wakiil Itoobiyaan jogo ag fadhiisan mayno oo ay uga soo carari jireen, maantana dhunkasho kula dul dhacaan Males Zenawi iyo Col Gabre. Hadii Salaad C Jeelle uu shaley Xamar kula shirbaayey, maantana Cumar Xaashiba dhaanto u cayaaraya, balse inta xaqa jecel sugi maayaan inta mid kale ay dhacayso.
Balse DKMG la leeyahay Beesha caalamka ayaa taageereysa, Somalida waxa u roon iney fahmaan cida Beesha calaamka maanta tahay? Sow maha kuwa Mareykanka horkacayo sida EU, Israel iyo Japan, sow kuwani ma ahan kuwa Ciraaq halaas dhigey iyadoo shucuubtooda maalinkasta mudaaharaad dhigayey inaaney Ciraaq heysan hubka wax baabi’iya (weapon of mass destruction). Sow mahan kuwa maanta leh hala soo qabto Cumar Al-Bashiir, halka Eriteria dhulkeeda loo go’aamiyey ay weli Itoobiyanka xoog ku heystaan. Somalida waxa u roon iney fahmaan ineysan jirin wax la yiraahda bulshada caalamka oo dantooda u naxaysa.
Wadamada Carabtu wey fahamsan yihiin marna lagama yaabo inta DKMG ka jirto ay wax ku taraan iney lug-gooyaan mooyaane, sababtoo ah waxay halis ku noqoneysaa DKMG-Itoobiya halis u timaada Carabta iyo Islaamkaba. Taasi waxaa tusaale kaaga filan shirarkii ay DKMG tagtey oo iyagoo faro maran la soo direy. Waa maxay sababta keentey in EU-da & US lacag $200 million ugu deeqaan DKMG oo ay tii hore ugu deeqi waayeen?Maxay UN-ka iyagana u rabaan in lacag tiradaas gareysa ugu deeqaan DKMG? Hadii Somali wax u tari lahaayeen UNDP/UNICEF/WHO iwm isbitaalada 20 sano baaba’san oo malaayinta doolar ku qaataan ayay dib u howlgalin lahaayen, iney wax cusub sameeyaan iska daayee kuwii jirey ayey horey u sii baabi’iyeen. Mise Sh Shariif, In C/Rashid iyo Shariif Xasan ayayka jecel yihiin C/lahi Yusuf, Nuur Cade iyo Sh Adan Madoobe? Mise kooxdan cusub ayaa aqoon daridooda in looga faa’ideysto ayaa la rabaa inta kuwo kale laga keenayo?
Waxaan maqaalkeyga ku soo gunaanudayaa in Somali hadii aynu nahay oo uu dhulkan Illaahey inagu manaystey oo inagu aan isku garano inaana dhulkan inaga aan leenahay aan xaqa iyo baadilka ka saarno, una is taagno sidii aynu u samata bixin lahayn dhulkeena iyo dadkeena hororka ku soo yihiin cadow badan oo is biirsaday.
Faafin: SomaliTalk.com | May 29, 2009